बेडरूम हामी हाम्रो अधिकांश समय खर्च स्थान हो, अझै पनि यो सजाय आउँदा सबैभन्दा उपेक्षा गर्न tends. आजकल, पैसा एक महत्वपूर्ण कारक हुन सक्छ! यहाँ सबै संग कुनै पैसा आफ्नो ठाउँ brightening लागि केही ठूलो सुझाव!
1.पुनःव्यवस्थित! एक नयाँ ताजा व्यवस्था सधैं एक कोठा नयाँ महसुस. प्रयास गर्न आफ्नो फर्नीचर लागि नयाँ कोण एक विकर्ण मा आफ्नो ओछ्यानमा राख्न नडराऊ, वा कोठा को बीचमा सही!
2. स्कार्फ लागि आफ्नो दराज खोजी, tablecloths, वा आफ्नो रंग योजना बधाई कि pillowcases पनि.
तपाईं एक ड्रेसर शीर्ष वा आफ्नो रात्रीस्ट्यान्ड किनारा नरम तपाईं पहिले नै आफ्नै कुरा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा खाट को खुट्टा मा एक राम्रो शाल राख्नु. तपाईं पहिले नै छ भने तकियों फेंक आफ्नो ओछ्यानमा मा (तपाईं छैन भने, यसलाई अर्को कोठा बाट तिनीहरूलाई चोर्न समय!) तपाईं पनि नयाँ रुप लागि तकियों वरिपरि यी कपडे र्याप गर्न सक्नुहुन्छ, र बस सुरक्षा पिन पछि यो.
जेली बीन प्लान्ट (Sedum rubrotinctum) (फोटो क्रेडिट: विकिपीडिया)
3. थप एक बोट आफ्नो कोठामा. तपाईंको अवस्थित बिरुवाहरु को एक आफ्नो बेडरूम मा आनन्दित हुनेछ भने हेर्न आफ्नो घर वरिपरि हेर, त्यसपछि यसलाई त्यहाँ सार्न! तपाईं स्थानांतरण लागि एक बिरूवा तयार पाउन सक्नुहुन्छ भने, एक बनाउन! धेरै बिरुवाहरु cuttings देखि उत्पादन गर्न सकिन्छ, या त आफ्नो अवस्थित houseplants, एक मित्र तपाईं कटौती गर्न दिनेछ, या केहि पनि आउटडोर बिरुवाहरु.
आइवी र धेरै छाया groundcovers धेरै राम्रो houseplants छन्. तपाईं पनि आफ्नो बाल्यकाल एक बिट relive र एक आलु कट बढ्न सक्छ, भुईँकटर, एक चिम्टी वा गाजर भन्दा माथि! कन्टेनर लागि, तपाईंको भान्सा मा हेर्न अलमारी.
पुरानो चायदानी र कप, ग्लास कटोरे, पनि पाक व्यञ्जन अद्वितीय कन्टेनर बनाउन सक्छ.
4. आफ्नो कोठामा स्मरणीय थप्न. तिनीहरूले मेरो बिस्तर गर्न अर्को सानो छँदा म मेरो छोराछोरीलाई प्रत्येक एक एक फोटो राख्न, र यो सधैं मलाई मुस्कान बनाउँछ. झुन्डिएको बारेमा कसरी आफ्नो विवाह पर्दा को headboard देखि, वा आफ्नो फ्रेमन विवाह निमन्त्रणा वा पुरानो प्रेम पत्र?
5.गन्ध थप्न. तपाईं घरमा कुनै पनि Potpourri वा धूप छैन भने, केही सुन्तला peels अप कटौती र सुक्खा गर्न अनुमति, त्यसपछि तपाईं आफ्नो अल्मारी मा छ जे मीठो मसला संग मिश्रण. (यो केवल एक चिम्टी लिन्छ, दालचिनी प्रयास, अदुवा, वा allspice।) तरोताजा र प्रेरित गर्न आफ्नो कोठा मा खुला कचौरा आफ्नो Potpourri ठाँउ!
पछि गर्मी मा, बनाउन आफ्नो कोठा मा फूल समावेश गर्ने पक्का, तपाईं आफ्नो यार्ड मा गुलाब वा अन्य सुगंधित फूल छैन भने, roadside daisies पनि ठूलो गंध गर्न सक्नुहुन्छ!
केही साना परिवर्तनहरू, कुनै पैसा संलग्न, र एक राम्रो, थप सकारात्मक स्थान सुरु र प्रत्येक दिन समाप्त गर्न को लागि!
तपाईं घर आंतरिक गर्मी रंग थपेर के सिक्न सक्छौं
77310	45 बेडरूम, व्यापार, फूल, बागवानी, Houseplant, प्लान्ट, किनमेल, फेंक तकिया
← कफी आत्महत्या जोखिम कम गर्न सक्छ पिउने! ब्वाँसो’ चीत्कार निकाल्नेछ कम्प्युटर द्वारा ID'd सकिन्छ →